Xuska Maalinta Haweenka Adduunka – Rasaasa News
Xuska Maalinta Haweenka Adduunka
Mar 8, 2011 March 8 Maalinta Haweenka Adduunka
March 8, waa maalin aad u weyn waana maalinta uu aduunku u aqoonsaday xuquuqda haweenka adduunka, muddo haatan laga joogo boqol sano ayey ahayd kolkii ugu horaysay ee la aqoonsaday xuquuqdooda haweenka. 1911 ayey ahayd kolkii ugu horaysay ee uu aduunku meel saaray xuquuqda, waxaase dhab ah in ayna haweenka aduunku wada helin xuquuq ay u dhan yihiin.
Xus habeenkii xalay ahaa ka dhacay Geneva, ayaa laga akhriyey warbixino naxdin leh oo ka sheekaynaysay, sida loola dhaqmo haweenka meelo ka mid ah aduunka, arimahaas oo ay ka mid yihiin gacan qaadka, kufsashada, guurka khasabka ah arimahaas oo ay u gaystaan ragu.
Waxaa kale oo ay haweenku ka ooman yihiin wabarashada iyo shaqooyinka kuwaas oo haweenka ku khasba in noloshoodu ay ku xidhnaato raga.
Dalalka reer galbeedka oo kaliya ayey ka jirtaa xuquuqda haweenku, laakiin inta badan haweenka aduunku way ka maqan tahay xuquuqda uu aduunku u aqoonsaday haweenka.
Qaarada Afrika ayaa ka mid ah meelaha ugu badan ee dhibaatooyinka loogu gaysto haweenka.
Dhulka Somalida Ogadeeniya waxaa uu ka mid yahay meela ugu dhabaatada badan haweenka, waxaana loo kala iibsadaa sida Alaabooyinka oo kale. Gabadha yar ee ku nool dhulka Somalida Ogadeeniya dhibaatooyinka soo gaadha waxaa u dhaami lahayd in ayna dhalanin.
Arimaha dhibaatada leh ee loo gaysto haweenka Somalida Ogadeeniya waxay bilowdaan kolka ay gabdhuhu aadka u yar yihiin sida;
1. kolka ay dhashaan waa laga naxaa, sidii iyaga oo iska dhigay dhadig.
2. Iyaga oo aad u da,a yar ayaa xubnaha tarankooda la Jarjaraa, si ay cabsi waligood ugu noolaadaan
3. waalidkood waxbarsho ma geeyo.
4. Waxaa laga dhaadhiciyaa in ay u adeegaan wiilasha la dhashay iyo raga guursada oo kaliya.
5. Kolka ay 15 sano gaadhaan waxaa loo guuriyaa nin ayna rabin, oo waalidkood xoolo kaga qaato
6. Wanaag uguma tagto ninka qalaad ee Iibsada, waxa uu doono ayuuna ka yeelaa nolosheeda.
7. Haweenka ku nool dhulka Somalida Ogadeeniya celcelis ahaan cimrigoodu ma dhaafo 45 sano.
Dhibaatooyinkaas iyo kuwa kale oo badan waxay gooni u yihiin haweenka ku nool dhulka Somalida Ogadeeniya, mana muuqato in mustaqbalka dhaw ay ka baxaan hadii ayna bulshada Somalida Ogadeeniya badalin dhaqamada ay ku dhaqaan haweenka.
Haddaad Musuq Diiday, Daryeel Shaqadaada/ WQ Abdirashid Jire Qalinle
Dawlada Atobiya oo ka Shaqaynaysa Soo Duufsashada Qurba Joogta Maraykanka